Dowladda Kenya oo shaacisay in unugyo ka tirsan Al-shabaab ay joogaan Nairobi iyo Mombasa – Radio Daljir
Agoosto 31, 2013 3:52 b 0
Nairobi, August 31, 2013 – Dowladda Kenya ayaa shaacisay in ay ku dartay ururka Al-shabaab kooxaha dhibaatooyinka iyo qaswadayaasha ah ee aad looga yaqaano dalka kenya.
Masuul u hadlay dowladda Kenya ayaa? sheegay in ururka Al-shabaab ay muujiyeen muuqaalo waa weyn oo cadaynaya in ay yihiin qaswadayaal, kuwaas oo ku mashquulsan bur burinta iyo khal-khal gelinta amniga dalka Kenya.
Guddiga u qaabilsan Kenya diiwaan-gelinta falalka dembiyada ah ee dalkaas ka dhaca, ayaa shaaciyey in ay ururka Al-shabaab ku dareen ururrada aadka loola socdo xaaladooda, waxay xaqiijiyeen in lagu daray 46 urur oo loo aqoonsan yahay Qaswadayasha Kenya.
Kenya waxay sheegtay in ay jiraan kooxo loo aqoonsan yahay Agargixiso, kuwaas oo hadda mashquulsan bur burinta iyo khalkhal gelinta amniga iyo? hantida dalka Kenya, balse waxay dowladdu cadaysay in ay il-gaar ah ku hayn doonto ururka.
Dowladda Kenya waxay sheegtay ururka Argagixisada ah ee Al-shabaab iyo ururrada xiriirka la leh in ay ku sii fideen dalka Kenya iyo magaalooyinka waa weyn iyagoo u jooga si qarsoodi ah, guddiga diiwaan gelinta dambiilayaasha Kenya ayaa xaqiijiyey in ay jiraan unugyo ka tirsan shabaab oo Nairobi jooga.
Baarlamanka Puntland oo ka digay in khal-khaliyo shirka dib u heshiisiinta Taleex (Maqal+Sawirro)